Qoyskii Qadaafi Oo Galay Algeria, Dhimashada Mid Ka Mid Wiilashiisha Oo La Shaaciyay , NATO Oo Dib U Guratay Markii Hogaamiyayaasha Mucaaridka Lala Xidhiidhiya Al-Qaida | Araweelo News Network (Archive) -
Qoyskii Qadaafi Oo Galay Algeria, Dhimashada Mid Ka Mid Wiilashiisha Oo La Shaaciyay , NATO Oo Dib U Guratay Markii Hogaamiyayaasha Mucaaridka Lala Xidhiidhiya Al-Qaida
Tripoli (ANN)Dawlada Algeria ayaa xaqiijisay inay qoyslkii hogaamiyihii dalka Libya ee xukunka laga tuuray todobaadkii hore Col. Mucmar Al Qadaafi ay galeen dalka Aljeriya ee ay jaarka yihiin maalintii Isniintii. Kadib markii ay kas talaabeen xuduuda dalkaa. Safiya oo ah Xaaskii Qadaafi iyo
sadex ka mid ah todoba caruur ah oo uu dhalay Col Qadaafi ayaa galay dalka Algeria. Sidaana waxa xaqiijiyay sarkaal u hadlay xukuumadda dalka Algeria. Caruurta uu dhalay ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid yahay Maxamed Mucmar Al- Qadaafi.
Mucaaridka ayaa dalbanaya inay u baahan yihiin duqayn dhinaca cirka ah in lagu sii wado magaalada uu ku dhashay Qadaafi ee Sirta oo ka mid ah meelaha weli gacanta ugu jira Qadaafi.
Dhinaca kalena waxay dalbanayaan mucaaridku inay ciidmada daacada u ah Qadaafi eek u sugan halkaasi is dhiibaan. Laakiin dadka ku nool magaaladaa iyo ciidamada daacada u ah Qadaafi ayaa sheegay inay magaalada Sirta moosas dhiig ahi ku xeeran yihiin, isla markaana aanay weligood is dhiibayn.
Magaalada Sirta oo ay ku nool yihiin 75 kun oo qof ayaa ah mid mihiim u ah dhinaca isu socodka Tripoli oo caasimada ah iyo Bengasi, isla markaana ahmiyad weyn u leh dhinaca dhaqaallaha ee saliida. Mucaaridka dalka Libya ayaa awoodi waayay inay weli gacanta ku wada dhigaan meelo ka mid ah magaalada caasimada ah ee Tripoli, iyadoo ay xaalada Libya hada u muuqato inay faraha ka baxday, isla markaana ay mucaaridku dalbanayaan weli inay NATO sii wadaan duqaynta dhinaca cirka. Laakiin dhawrkii maalmood ee u danbeeyay markii ay mucaaridku galeen mid ka mid ah fadhiisimada ugu waaweynaa ee Qadaafi ee baabal casiisiya, waxa muuqatay inay xaaladu si weyn isaga bedeshay sidii laga filayay, iyadoo ay soo baxeen xasuuq boqolaal qof oo lagu arkay bakhaaro iyo goobo u dhaw madaarka Tripoli, isla markaana waxa jira canbaarayn dhinaca Hay’addaha xuquuqda aadamaha ah oo ku canbaareeyay mucaaridka iyo taliskii Qafaafiba inay ku lug leeyihiin xasuuqa ka dhacay halkaa maalmihii u danbeeyay.
Dhinaca kale mucaaridka ayaa sheegaya inay weli u arkaan Qadaafi inuu khatar ku yahay Libya iyo aduunkaba, laakiin warbaahinta reer galbeedka oo qayb weyn ka ahayd sidii xukunka looga tuuri lahaa Qadaafi dhawrkii bilood ee ay socotay duqaynta dhinaca cirka iyo taageerada milateri ee mucaaridka Libya ayaa hada si weyn u soo bandhigay dhaleecayn ku waajahan NATO iyo hawlgalada Libya ee ay mucaaradka ku taageerayaan. Kadib markii ay warbaahinta reer galbeedku soo dhigtay muqaalo iyo qoraalo lagu sheegayo inay koxda Mucaaridka Libya hormood u yihiin xubno caan ah oo si weyn aduunka looga baadi doonayay, kuwaas oo lala xidhinayay shebekada Ururweynaha Al-Qaida . xubnahaa farta lagu fiiqay waxa ka mid ah hogaamiyaha dhinaca Milateriga ee mucaaridka Abdelhakim Belhaj, kaas oo la sheegayo inuu ka mid ahaa xubno si gaara Osama Bin laden usoo tababaray, isla maraakana kasoo dagaalamay dalalka Afghanistan Iraq iyo meelo kale.
Dhaleecayntan dhinaca warbaahinta ee hogaamiyaasha mucaaridka lagula xidhiidhay Al-Qaida ayaa keentay inay xulufada NATO hada dib uga gurtaan arrimaha Libya ee dhinaca taageerada Mucaaridka oo ay wadaan qorshihii ay wax kaga bedeli lahaayeen siyaasadood ku wajahan halkaa. Horaantii July ayaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha xulufada NATO sheegay inay mucaaridka Bengasi ku jiraan xubno ka mid ah Ururweynaha Al-Qaida, balse mucaaridka ayaa waxba kama jiraan ka dhigay dhawaaca, sidoo kale Qadafi ayaa mudooyinkii ay bilaabmeen duqaymiha dhinaca cirka ee xulufada NATO, wuxuu marar baddan ku cel celiyay inay isu bahaysteen NATO iyo Alqaida. Laakiin dhegna laama dhigin hadalka Qadaafi oo loo arkayay inuu isku difaacayo oo keliya si looga joojiyo duqaynaha.
Dhinaca kale Col. Qadaafi wiilka uu dhalay ee Khamiis Mucamar Al-Qadaafi oo haystay xero Milateri oo ku taala baabal casiisiya ayaa wararka qaar sheegayaan inuu dhintay, balse weli ma jiraan cadaymo muujinaya dhimashadiisa. Qadaafi wiilashiisa kale sida Seyf Islam iyo saraakiil kale oo muhiim ah ayaa la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin dalka, isla markaana ay daaha dabadiisa ka maamulayaan dagaalada ka socda meelaha qaar oo hada xaalada Libya u muujiyay mid fawdo ah oo cabsi weyn ku ah wadamada gobolka iyo aduunkaba. Iyadoo dagaalo iyo xasuuq qabaail ka bilaabmen halkaa, isla markaana maalmihii u danbeeyay la helay boqlaal qof oo la rumaysan yahay in la xasuuqay, kuwaas oo ay adkayd in xataa la aqoonsado wejiyadooda.